दिदी नेपालले बहिनी भारतलाई लेखेको खुलापत्र – shubhabihani
Home / बिचार/ब्लग / दिदी नेपालले बहिनी भारतलाई लेखेको खुलापत्र
दिदी नेपालले बहिनी भारतलाई लेखेको खुलापत्र
Posted by: admin in बिचार/ब्लग November 2, 2015	Comments 2,783 Views
प्यारी बहिनी भारत
आज धेरैपछि तिमीलाई नलेखी नहुने भएर सार्वजनिक पत्र लेख्दै छु, आशा छ बुझ्ने कोसिस गर्ने छौ । बहिनी तिमीले गरेको माया–प्रेम छँदाछँदै पनि आजकल तिम्रा छोराछोरीले गरेको व्यवहारले मेरा छोराछोरी धेरै दुःखी छन् ।
तिम्रो र मेरो सम्बन्ध सुमधुर हुँदाहुँदै पनि तिम्रो–मेरो इतिहास छोराछोरीलाई पढाएनौ कि भनेर सम्झाउन खोजेकी हुँ । बहिनी यो पृथ्वी आमाको जन्म भएदेखि आमालगायत हामीले धेरै किसिमका दुःखकष्ट भोगेका छौं । अझ कति भोग्न बाँकी छ, त्यो कुरा समयकै गर्वमा छ । आफ्नै छोराछोरीले दिएको दुःख तिमी र मलाई कम छैन । तर पनि आफ्ना सन्तानको प्रगति उन्नति चाहनु हामी दुवैको चाहना हुनु स्वाभाविक हो । बहिनी कति कुरा नभनुँ भन्दाभन्दै ढिला भइसक्यो, बाध्यताले भन्नुपर्ने भो । हाम्रा छोराछोरीको बुद्धि पुगेको भए आज तिमीले र मैले यसरी गफ गर्नुपर्ने थिएन ।
बहिनी के गछ्र्यौ ? तिम्रा केही छोराछोरीले भारतलाई दाइ (बढेभाइ ) भन्न थालेछन्, यो कसरी सम्भव भयो ? तिम्रा छोराछोरीले तिमीलाई भारत आमा भन्छन् भने भारत आमा कसरी एसियाको दाइ हुन्छे ? आमा भनेको पुलिंग कसरी हुन्छ ? अझ तिम्रा केही छोराले नेपाल (मलाई ) छोटा भाइ (कान्छो भाइ) भन्ठानेछन् । यस्तो बुद्धि तिम्रा छोराछोरीलाई कसले सिकायो ? तिम्रो जन्म र मेरो जन्म नछुटिने कुन इतिहास पढेर यस्तो भन्ने दुस्साहस आयो ? तिमीलाई दाइ ठान्ने मलाई भाइ ठान्ने यो कस्तो संस्कार हो ? आफ्नी आमा कि दिदी हुन्छे कि त बहिनी । यत्रो साधुसन्त र सभ्यताको इतिहास भएको मुलुकमा आज किन ज्ञान भएन ? फेरि कुन दिन तिम्रा छोराले तिमीलाई जेठी भन्लान्, नेपाल (मलाई ) कान्छी भन्लान् । भारत मातालाई दाइ भन्ने नेपाल मातालाई भाइ भन्नेले जे पनि भन्लान् । अरु छोड, केही नलागे भारत मोटी छ, त्यसैले दिदी भन्लान् । तिमी मोटी हुँदैमा दिदी हुन्छ्यौ त ? फेरि आफू के गरी मोटी भएँ भन्ने तिमीलाई थाहा छ, सबै कुरा बच्चाहरूलाई किन भन्नु ? तिम्रो भलाइका लागि मैले कति शरीर काटेर दिएको छु, त्यो तिमीलाई र मलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यतिखेर मेरा सन्तान कसरी रोए ? भो ती कुरा अहिले नगरौँ, सम्झँदा मेरा पनि आँसु आउँछ्न । यति हुँदाहुँदै पनि मेरा सन्तान तिम्रो धर्तीका लागि धेरै अघिदेखि खुन बगाउने रक्षक थिए । अहिले पनि छन् । त्यसैले सोच अहिले नै आफ्ना सन्तानलाई इतिहास पढाइ हाल, भाइभाइ भएको भए सीताको बिहे रामसँग हुन्थ्यो त ? बहिनीबहिनीका सन्तान भएर पो बिहे भएको । तिमीले संस्कार भएकी नारी मेरो देशमा आए लक्षिन हुन्थ्यो भनेपछि मैले जनकलाई भनेर त्यत्रो यज्ञ गर्न लगाएँ । नेपालका ऋषिमुनिले त्यत्रो साथ दिए । राम र सीता भारत वर्षको आदर्श आत्मा हुन गए तिम्रो–मेरो नाम र गौरव बढाए । हाम्रो गौरव आजको हो र ? हामीले के मात्र साटेर चलाएनौँ ? साँचोभन्दा हामीले जे थियो, एक–अर्कामा साटेर धेरै काम चलायौँ, धेरै वर्ष बितायौँ । सोच त एक गाँस, दुई भाग लगाएर पनि कत्रो समय हामीले बिताएका छौँ, इतिहास साक्षी छ ।
हाम्रो सम्बन्ध सृष्टिसँगैको हो, शिवको जन्मबाट संस्कार र सभ्यताका हामी हिमायती बन्यौँ । हाम्रो गौरवमा विश्व तिलमिलाएको थियो । कालान्तरमा आमाले धेरै बहिनीहरूको जन्म दिनु भो, त्यसमा हाम्रो पनि गल्ती छ । बेहोसीमै सन्तान वृद्धि धान्न र व्यवस्थापनका कारण धेरै आमाहरूको आवश्यकता पर्यो । त्यसलाई हामीले स्विकार्दै विश्वका मानव एकै हुन् भन्ने सभ्यताको वकालत गरिरह्यौँ । आजसम्म पुरानो गौरव तिम्रा र मेरा सन्तानले थेगेका छन्, त्यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो ।
बहिनी, बीचमा अरु बहिनीका सन्तानले तिम्रा सन्तानमाथि राज गरे, त्यो दुःखको घडी मैले बिर्सेको छैन, क्रिस्टियन र मुस्लिम हाम्रै बहिनीका सन्तान भए पनि उनीहरूको संस्कार, भर्खरको इतिहास बोकेका र पुराना इतिहासको ज्ञान नभएका कारण हाम्रा सन्तानहरूको सभ्यता स्विकार्न नसकेर भएको झगडामा तिम्रा सन्तानले दुःख पाए । त्यो लामो समय चल्यो तर जे–जस्तो भए पनि हाम्रो गर्भबाट जन्मिएका सपुतका कारण तिम्रा सन्तानले मुक्ति हुने मौका पाए, जसको बलमा विश्वसामु सगौरव प्रगति गरेर वर्तवान समाज चलेको त्यो तिम्रो र मेरा लागि खुसीको कुरा हो ।
बहिनी के भनौँ, आजको विश्वमा पनि हाम्रै बहिनीका सन्तान एक–अर्काका दुश्मन छन्, जसकारण हामी दिदी–बहिनी र आमा स्वयंलाई गारो त छँदै छ । यस्तो समस्याबीच पनि तिम्रा मेरा सन्तानले पाठ सिकेनन् । बेलाबेलाका घटना हेर्दा मोटी सानिमाका धेरै सन्तान भएका कारण मेरा छोराछोरीले संयमता अपनाएर सन्तुलन घाटा खाएर भए पनि कायम राखेको इतिहास छ । अझ पनि त्यो सोच कायम छ । वर्तमानमा मानी आएको विक्रम संवत २००७ साल, ०१७, ०४६ र ०६३ मा अनावश्यक राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपमा भारतीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीको हात छ भनेर कुडिएको नेपाली मन ०७२ मा आएर समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नजिकका दिदीबहिनीले परेका बेला साथ दिनुपर्नेमा उल्टो च्याँखे थाप्ने काम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको आपसी झगडालाई देखेर मौकाको फाइदा उठाएको भन्ने नेपालीले बुझेका छन् । जसले गर्दा दीर्घकालीन द्वेष रहने र आपसी प्रगतिमा एक–अर्का नै विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुने शंका छ ।
बहिनी अरु त गरे गरे, मैले निष्पक्ष हेर्दा पनि विदेशबाट आएको तेल त्यो पनि नेपालीले खुन–पसिना गरेर देश–विदेशबाट श्रम र शरीर बेचेर कमाएको पैसाले नगदमै किनेर ल्याउने हो । बाटो भारतको परेको भनेर भारतसँग सम्झौता गरेकामा त्यसमै राजनीति गरेर विभिन्न बहानामा जाबो किनेर ल्याउने तेल नै नदिने गरेपछि चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो । अझ अरु धेरै कुरमा भारतमै भर पर्नुपरेको भए अरु कति धोका हुने होला भनेर मेरा सन्तान विक्षिप्त छन् । नुन–तेल र ग्यासजस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीति गरेपछि सानिमाका सन्तान भनेर कसरी सहनु ? यसमा ठूलो अविश्वास र गुनासो छ । धर्म छोडेर, नैतिकता छोडेर, अगाडि बडेका तिम्रा सन्तानले तिम्रा कुरा पनि के मान्लान् र ? हुन त तिम्रै सन्तानको सिको गरेर संविधानमा धर्म नमान्ने भनेर हाम्रा सन्तानले पनि संविधानमा लेखिसके अहिले त समस्या परेर मलाई सम्झी राष्ट्रवादी भई टोपलेका छन् । पछि अलि सुख पाएपछि देश, धर्म, नैतिकता, संस्कार र सभ्यता भन्ने कुरा यी कलियुगीय सन्तानले के मान्लान् ? तर, आमाको मन सकेको सुख दिन सकिन्छ कि भनेर लेख्दै छु ।
हुन त बहिनी पैसाले सामान किन्ने कुरा हो, अरु बहिनीका सन्तानले पनि देलान् । तर, तिम्रो हाम्रो कुरा अलग हो । तिमीलाई पनि थाहा छ, चीन बहिनीका सन्तान व्यापारमा माहिर छन् । उनीहरू पनि तिमीहरूलाई नचिढ्याई नेपालमा समाधान खोज्न चाहन्छन् । अमेरिकन बहिनीका सन्तानले पनि भारतीयकै माध्यमबाट नेपालमा समाधान खोज्छन् । भोलि नेपालीले सीधै सम्पर्क बढाए विश्वमा भारतकै साख गिर्ला । स–साना आपसी कुरा बाहिर जालान्, छिमेकीले होच्याउने मौका पाउलान् । अरु मेरो चिन्ता केही होइन, सदियौँदेखिको हाम्रा सन्तानको संगत रहिरहोस् भन्ने हो । जन्मेपछि प्रकृतिले जसरी पनि समय हउन्जेलसम्म बँचाउँछ, तर सही व्यवस्थापन भए सबैलाई सजिलो भन्ने मात्र हो । बहिनी, दिदी भएर पनि गुनासो गरी नभन । तिम्रा सन्तान धेरै छन्, समस्या पनि धेरै होलान् । नेपालबारे आफ्ना सन्तानलाई छिमेकीको अन्तर्राष्ट्रिय नीति–नियम र कानुनअनुसार मात्र व्यवहार गर । सकेको सहयोग लिने–दिने गरेर युगौँयुगको संगत बनाइराख भनिदियौ भने पूर्वीय दर्शनको इज्जत बढ्ने थियो । बाँकी तिम्रो इच्छा । कुरा धेरै छन्, सबै कुरा भनेर मात्र बुझ्नु नजिकको सम्बन्धमा राम्रो होइन । आशा छ, यति लेखेपछि मेरो भाव बुझ्नेछौ ।
उही तिमीसंग संगत गर्न मन पराउने दिदी नेपाल
Previous: आयल निगमकै अधिकारी भन्छन् –चीनबाट ग्याँस आउँदैआउँदैन
Next: ‘भारतीय भूमिबाट आक्रमणपछि वीरगन्जमा जवाफी कारबाही’
नेपाललाई हृदयबाटै आफ्नो देश ठान्नेहरू जसले आफूलाई नेपाली हुनुमा गर्व गर्छन्, तिनले राष्ट्र, राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया ...